Tanàna mahafinaritra 20 any Galicia I | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, Inona no ho hita, Tsangatsangana
Galicia dia iray amin'ireo tany izay itiavanao azy, na teraka tao ianao na tsia. Toerana iray izay tsy iray amin'ireo dokam-barotra be mpahalala indrindra, saingy na izany aza, miaraka amin'ny fahendreny, dia nahavita nahazo toerana tamin'ny toerana tsara indrindra tany Espana tamin'ny zavatra maro. Ho an'ny mponina, ny morontsiraka, ny tontolo voajanahary ary mazava ho azy ho an'ny gastronomy. Mety nanao fialan-tsasatra ianao ary namakivaky ireo tanàna lehibe nefa tsy tsapanao fa tsy nahita zavatra lehibe ianao: ny tanànany mahafinaritra.
Anio dia hanome anao ny safidy voalohany an'ny Tanàna mahafinaritra 20 any Galicia, ary ho lavo isika. Izy rehetra dia samy manana zavatra manokana, zavatra nolalovana ary nijanona kely hahitana ny antony mampiavaka azy ireo manokana. Azonao atao sahady ny manao lisitr'ireo tanàna izay tsy maintsy tsidihinao rehefa miverina any ianao.
6 Ry Cebreiro, Lugo
Manomboka amin'ny iray amin'ireo tanàna izahay fa na dia kely aza dia manana mpizahatany betsaka. Izy io dia Combarro, any amin'ny Rías Baixas, faritra iray ankamamiana tokoa amin'ny moron-dranomasina sy ny gastronomie. Ao Combarro dia hahita vohitra fanjonoana mahazatra misy sary tena izy izahay ka handany ny fakana sary. ny sambo kely miloko, ny trano vato, ny arabe ety ary ny trano fisakafoanana manompo hazan-dranomasina dia mahazatra. Fa ankoatr'izay dia tsy maintsy jerenao ity tanàna ity amin'ny tranobe fitehirizam-bokatra tsara tarehy izay tsy mijery ny lohasaha sy ny lakroa vato.
I Ribadavia dia iray amin'ireo tanàna izay mbola mitazona ny ankamaroan'ny hatsarany taloha. Iray amin'ireo fitsidihana tena ilaina ny Castle of the Sarmiento. Raha tonga amin'ny fahavaratra ianao dia mety mankafy ny Festa da Istoria, miaraka amin'ny tanàna miakanjo toy ny medieval, ary raha tsy izany dia afaka mankafy ny divay sy tapa-horita foana ianao.
Allariz dia iray amin'ireo villa izay nitandrina mba tsy hahavery ny hatsarana rehetra ao amin'ny faritra taloha, ka voatahiry tsara. Raha te hahita isika a tanàna taloha voatahiry tsara miaraka amina hatsaran-tarehy, tsy maintsy mankany amin'ity tanàna kely any Ourense ity isika. Mitadiava ny Fiangonan'i Santiago de Allariz, iray amin'ireo teboka manintona indrindra, ary mazava ho azy, andramo ny hamoy mangingina amin'ny alàlan'ny arabenà mandry, izay voalaza fa namboarina niaraka tamin'ny sisa tavela tamin'ny lapa taloha izay tsy misy intsony.
Any amin'ny Rías Baixas dia misy zoro mahaliana maro, tsy foana fa iray amin'ny faritra fizahan-tany indrindra. Hitanay ny tanànan'i Kambôdôja, malaza noho ny fahatongavany ny divay Albariño. Ankoatry ny fijanonana amin'ny fanandramana ireo divay malaza ireo amin'ny iray amin'ireo famiazam-boalobony, dia mila mahita zavatra vitsivitsy toa ny sisa tavela amin'ny Santa Mariña de Dozo, eo afovoan-tanàna, ilay vato tsara tarehy Pazo de Fefiñáns sy Torre de San Sadurniño.
Voalaza fa izay tsy mandeha any San Andrés de Teixido ho faty dia velona, ​​ka tsy maintsy handalo eto isika na ho ela na ho haingana, ary mazava ho azy fa mendrika izany ny dia. Villa kely dia kely nefa misy fahitana miavaka eny amin'ny vatolampy. Ilaina ny mitsidika ny fitoerany masina, ary ankafizo ihany koa ny fijerin'ny ranomasina raha vao tonga eo amin'ity toerana fivahinianana mahaliana ity ianao. Satria raha tsy izany dia tadidio fa tsy maintsy mandeha amin'ny fanahy ianao rehefa miala amin'ity tontolo ity.
Ry Cebreiro, Lugo
O Cebreiro dia tanàna iray any Lugo ary malaza amin'ny famerenany ny palloza mahazatra, fananganana razana sasany izay nanjary tsy nampiasaina. Tsy misy isalasalana fa fomba iray hiverenana any aoriana any mba hahitana ny fomba niainan'ny olona tsy ela akory tao amin'ity faritra amin'ny tendrombohitra Lugo ity. Tsy tokony hitsahatra amin'ny fanatonana ny Serra do Caurel sy ireo lemaka Sil isika rehefa avy nankafy ny tantaran'ireo pallozas mahagaga an'i O Cebreiro.
Oritgueira dia tanàna amoron-tsiraka izay nanjary nalaza noho izany fetin'ny fahavaratra mozika celtika. Afaka mahita moron-dranomasina mahafinaritra isika ary koa ny banky fanta-daza manana fomba fijery tsara indrindra manerantany, eo amin'ny hantsam-bato Loiba. Ny fitsidihana an'ity tanàna ity miaraka amin'ny seranan-tsambo sy ny tontolo voajanahary manodidina dia iray amin'ireo làlana tsara indrindra azontsika atao.
Monforte de Lemos dia misongadina indrindra noho izy toerana manan-danja tamin'ny vanim-potoana fahagola, tanàna mimanda izay itehirizana tranobe maro. Ao amin'ity villa ity dia afaka mankafy ny tranony malaza miaraka amin'ny Torre del Homenaje ianao, ny toerana manandanja indrindra, ny Count Palace na ny Monasiteran'i Benedictine. Azonao atao ny mitsidika teboka ara-tantara misimisy kokoa ao amin'ity tanànan'i Lugo tsara tarehy ity, toy ny Old Bridge, izay voalaza fa manana fiaviana romana. Mazava ho azy fa tsy azo iadian-kevitra ny hatsarany.
Nahavita ity laharana voalohany ity izahay niaraka tamin'ny tanànan'ny Baiona, any amin'ny faritra atsimon'i Galicia. Tanàna mangina eo amoron'ny ranomasina izy io, ary tazana ny Nosy Cíes malaza. Raha ny marina, eto amin'ity tanàna ity dia azonao atao ny maka sambo hitsidika azy ireo. Fa aloha tsy maintsy ankafizintsika ny morontsiraka sy ny Rovan'i Monterreal. Ho hitantsika ihany koa ny dika mitovy amin'ny karavel de la Pinta ao amin'ny seranan'i Baiona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tanàna mahafinaritra 20 any Galicia I